ပိုလန် vs ဒိန်းမတ် - ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ | ဘောလုံးခန့်မှန်း | Bet tip
+7/ 9584-983-763infအဆိုပါ@sအဆိုပါcက cerbetshoot.ပူးတွဲm
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ: စက်တင်ဘာ 01 2017 | နောက်ဆုံးအပေါ် updated 1 စက်တင်ဘာလ 2017 တွင် 14:11 GMT +2| Viewed 3362 ကြိမ်.
ပိုလန် vs ဒိန်းမတ် – ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ
ပိုလန် vs ဒိန်းမတ် – ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ, ဒိန်းမတ်ကြောင်းကောင်းစွာခြေစစ်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်ပါခဲ့ပါဘူး, ပထမသုံးကျည်နှင့် ထိုအချိန်မှစ. နှစ်ခုရြှုံးရှိခြင်း, သူတို့ပြီးသားအိမ်မှာသူတို့ပျောက်ပိုလန်မှရြှုံးခံစားခဲ့ရအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအနေအထားရဖို့အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရနှင့်မွန်တီနီဂရိုး. သို့သျောလညျး, ဘေးထွက်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ကာဇက်စတန်ကျော်အောင်ပွဲရတဲ့နှင့်ရိုမေးနီးယားမှလမ်းပေါ်ရှိအမှတ်ယူပြီးကတည်းကတိုးတက်လျက်ရှိသည်.
ဘေးထွက်ပိုကောင်းပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်အထင်ကြီးဖို့နေဆဲဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲအဖြစ်အာမေးနီးယားကျော်ခဲ့, သူတို့တတိယအနေအထားခွဲဝေမှုမှာမတ်တပ်ရပ်နေချိန်တွင်အမှန်တကယ်ဒုတိယရရှိခဲ့ပြီးတစ်ဆယ်အချက်များနှင့်အတူမွန်တီနီဂရိုးနှင့်အတူထားရှိ, ပိုလန်ကနေခေါင်းဆောင်များထက်ခြောက်လမှတ်လျော့နည်းသောအရာ. ၏သင်တန်းသူတို့ဆိုးဆိုးရွားရွားဒီမှာဒုတိယအနေအထားလိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကဘေးထွက်ဒီတစ်ခုအတွက်အနိုင်ရရမယ်အခြေအနေနီးစပ်ဖြစ်နေဆဲကြောင်း. သူတို့ရဲ့လတ်တလောပွဲစဉ်တစ်ဦးအဖြစ်အဆုံးသတ် 1:3 အယ်လ်မတီအတွက်ကာဇက်စတန်ဆန့်ကျင်အောင်ပွဲ, သူတို့ရဲ့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် 43 ကတည်းကလျော့နည်းနေတဲ့လူနှငျ့အတူကစားကသုံး pointer ကိုရရှိရန်ဒိန်းမတ်ဘက်များအတွက်အလွန်ခက်ခဲမဟုတ်ခဲ့အဖြစ် (Jorgensen ကနေပန်းတိုင်များ, Eriksen (ပြစ်ဒဏ်အနေဖြင့်) နှင့် Dolberg).
ယခင် Match မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပတေရုသ Ankersen (19/1, ကိုပင်ဟေဂင်), Erik Sviatchenko (5/1, ဆဲလ်တစ်), ကွင်းလယ်လူဒံယလေသ Wass (16/0, ဆဲလ်တစ်), Pierre ၏ Emile Hojbjerg (21/1, ဆောက်သမ်တန်) ကို Forward Yussuf Poulsen (20/3, Leipzig) နဲ့ Martin Braithwaite (17/1, Middlesbrough) ဒီနေရာမှာကစားမညျမဟုတျ.
ပိုလန်, အခြားတစ်ဖက်မှာ, ဒီခြေစစ်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနီးစပ်ပြီးပြည့်စုံက start ဖို့ရှိပါတယ်, သူတို့ငါးအောင်ပွဲနှင့်ပဲတဦးတည်းမဲနှိုက်ကြပြီးကတည်းက, ခြောက်လအချက်များမွန်တီနီဂရိုးနှင့်ဒိန်းမတ်ထက်ပိုမိုနှင့်ခြမ်းနှင့်အတူယခုစားပွဲဦးဆောင်ရုရှားနိုင်ငံများအတွက်တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲလက်မှတ်ရောက်ရှိရန်နီးစပ်ထက်ပို 2018.
ကာဇက်စတန်မှသွေးဆောင်စတင်ပြီးနောက်, ပိုလနျတိုးတက်လာမည့်ငါးပွဲမှာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြသ, တစ်ဦးအနေဖြင့်မကြာသေးမီကလာမယ့် 3:1 ဇွန်လအတွင်းမှာရိုမေးနီးယားဆန့်ကျင်အိမ်မှာအောင်ပွဲ. သူတို့ကလုံးဝဂိုးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်ပြိုင်ဘက် outplayed နှင့် created အခွင့်အလမ်းတွေကိုအများကြီးမလိုအပ်ခဲ့ဘူး, လည်းအလွန်သူတို့ခြေဖို့ဘောလုံးကိုနှင့်အတူအခါတိုင်းခြိမ်းခြောက်ရှာဖွေနေ. Lewandowski တခါထပ်ပွဲစဉ်၏ကြယ်ပွင့်ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်, အခြားလွယ်ကူသောသုံး pointer ဘို့ process ကိုရည်မှန်းချက်သုံးခုမှာသွင်းယူ.
ဂိုးသမား Artur Borus (64/0, Bournemouth) ရှိပြီးသားအချို့သောအချိန်များအတွက်အငြိမ်းစားထားပြီး, ဘေးထွက်ကိုလည်းနောက်ခံလူ Maciej Sadloj လွဲချော်စဉ် (15/0, Wisla), ကွင်းလယ်လူ Gregorz Krychowiak (45/2, အနောက် Bromwhich Albion), Tomasz Jodłowiec (49/1, လီဂငျြတပျဖှဲ) နှင့် Bartosz Kapustka (14/3, Freiburg) ယခင်အနည်းငယ်ခေါ်ဆိုခ-ups မှနှိုင်းယှဉ်၌ဤတစျခုအတှကျပျောက်ဆုံးနေ.
ထိုအနှစ်သင်း၏နောက်ဆုံးလေးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပွဲကျော်အဖြစ်အဆုံးသတ် 2.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်.
ဒိန်းမတ်ကဒီမှာတိုက်ခိုက်ရန်အပေါင်းတို့နှင့်သုံးမှတ်ရရန်ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်, ပိုလနျဘက်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်ကျောက်ကိုအစိုင်အခဲဖြစ်နေဆဲနှင့်သူတို့ကိုငါကအရမ်းအဖြစ်ကောင်းစွာခြိမ်းခြောက်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ရစဉ်. အဆိုပါပွဲစဉ်သည်အခြားလမ်းကိုသွားမမွငျနိုငျ, ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးစွန်းမှတစ်ဦးအလွန်ထိုးစစ်တဦးတည်းဖြစ်.